Ukuhlala Kwangaphakathi-Ngaphandle Efulethini Elithokomele Elizungezwe Okuluhlaza - I-Airbnb
Ukuhlala Kwangaphakathi-Ngaphandle Efulethini Elithokomele Elizungezwe Okuluhlaza
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Laetitia
Kozela ku-hammock ye-macrame emthunzini onamaqabunga ezihlahla zesundu eziheshazayo. Lungiselela ukudla ekhishini elivulekile futhi udle i-alfresco phakathi kwama-cactus asebhodweni. Zulazula uye phansi echibini ukuze ushiswe yilanga futhi ubhukude, bese ugeza ngamanzi emvula ekhazimulayo.
I-Terrace, Umbhede omkhulu, Umshini womoya oqandisayo
4.93 (izibuyekezo ezingu-157)
Ifulethi lisendaweni ethule kakhulu e-Sayulita, ebheke olwandle, futhi liwuhambo lwemizuzu eyi-10 ukuya esigcawini sedolobhana. Izinto eziseduze zifaka ulwandle, ukusefa, ukuyothenga, izindawo zokudlela, amabha, kanye nempilo yasebusuku.
Ibanga ukusuka e- Licenciado Gustavo Díaz Ordaz International Airport
Imizuzu engu-51 oyihamba ngemoto uma ukuminyana kwezimoto kungekho emgwaqeni
ULaetitia Ungumbungazi ovelele